Ithuba kwabafuna ukwethula iTop Billing
You are here: Home / Nelson Mandela Bay / Ithuba kwabafuna ukwethula iTop Billing
10 May 2012 By Google
USIMBA Mhere owadla umhlanganiso emncintiswaneni we-Top Billing ngonyaka odlule uthola ithuba lokuhambela imizi yomtakabani efana namahhotela. Kulo nyaka yithuba lakho nawe lokungenela lo mncintiswano.
UMA kuyiphupho lakho ukuba ngumethuli wezinhlelo zethelevishini uzokujabulela ukuzwa ukuthi uhlelo lwezokungcebeleka noluveza impilo yabantu abadla izambane likapondo i-Top Billing izobe inenhlolokhono ezifundazweni ezahlukene kuleli.
Lolu hlelo oluqoshelwa ezithabathabeni zemizi emihle nezindawo zokuvakasha ezisezingeni eliphezulu ludlala ku-SABC 3 njalo ngoLwesibili ngo-8 ebusuku kanti luphinde lwenza lo mncintiswano wokuvundulula amakhono kubantu.
Kulo nyaka inhlolokhono izoba seThekwini, Bloemfontein, Port Elizabeth, Polokwane, Cape Town naseGoli.
EThekwini kulindeleke ukuthi abe-Top Billing bavundulule amakhono e-Protea Hotel, eMhlanga, ngoMeyi 18 no-19 kusukela ngo-9 ekuseni kuze kube ngu-5 ntambama.
Okudingekayo ukuze ube yingxenye yale nhlolokhono wukuthi ungene kwi-website yalolu hlelo ethi www.topbilling.com.
Uma ungenayo i-internet ungakwazi ukungenela ngosuku lwenhlolokhono eMhlanga kanti kufanele uphathe ikhophi yefomu osuyisayinile eyotholakala khona e-Protea Hotel, isithombe sakho esisha nekhophi kamazisi wakho.
Imininingwane mayelana nalo mncintiswano itholakala kwi-website ye-Top Billing.
Kulindeleke ukuthi kube khona osaziwayo, osomahlaya nabanye abazobe beshukumisa inkundla kule nhlolokhono.
Emuva kwenhlolokhono kulindeleke ukuthi amajaji akhethe abangu-100 abahambe phambili, kulolo luhlu kuyophuma
Read More Here: http://www.iol.co.za/isolezwe/ithuba-kwabafuna-ukwethula-itop-billing-1.1293481
Previous: Church service results in confession and arrest
Next: Smith and Johnson named in one-day squad
Edward Manqele Chippa United Mamelodi Sundowns
Media briefing by the Minister of Police and the Acting National Commissioner of the SAPS regarding countrywide Safer Festive season operations: 12 January 2017
Bay Stars overpower Champions FC at Gelvandale Stadium
PE jewellery store robbers kill 66-year-old in botched hijacking
PE in the news: Zuma: Only the ANC can take SA forward‚ not the opposition
Nelson Mandela Bay council meeting off to slow start
Church service results in confession and arrest
EXTRA TIME: How Twitter reacted to Baroka beating Orlando Pirates to the TKO Cup
Port Elizabeth’s most famous statue: the Horse Memorial